पैसामा महादेबको तिनै नेत्र, यो त हामीले दिन दिनै भन्ने उखानै हो। त्यो बेला महादेबमात्रै बाठा थिए कि क्या हो, तिनकै मात्र धन देख्दा नेत्र उघ्रिदो रहेछ। लोकतन्त्रमा त सबै बाठै बाठा, धन देख्दा सबैका नेत्र खुल्छन। यसरी नै आखा खोलेछन सबैले, तिंकरबाट रक्तचन्दन तिब्बत पुर्याउदा। बिंडीमा त आखा खोल्ने भारतीय प्रहरी, यस्तो महंगो काठमा किन आखा बन्द गर्थे?यस्तै भयो पुस २४ गते। भारतको रक्तचन्दन नेपाल हुदै तिब्बत पुराइयो। रूख हुर्काउने भारत, खपत गर्ने चिन, हामीलाइ के को खसखस! तर नेपालमा रक्तचन्दनको ओसार पसार गैरकानूनी भएकोले यस्तो गैरकानूनी कार्यमा सुरक्षा निकाय नै मुछिएको चर्चामा आउनु कतै अब अदालतमा तराजु लिएर बसेको मुर्तीको आखाको पट्टी खोल्नु पर्ने त दिन त आएन?
तल छ कान्तीपुरमा प्रकाशित समाचार-
संरक्षणमा तिंकर हु“दै तिब्बत
दार्चुला, पुस २४ - भारतबाट ल्याइएको रक्तचन्दन तिंकर नाका हु“दै तिब्बत पुर्‍याउन प्रहरी, प्रशासन, वन कर्मचारी र माओवादी संलग्न रहेको स्रोतले बताएको छ । रक्तचन्दन बोक्न गएका भरियाका अनुसार प्रतिकिलो २ सय ज्यालामा करिब डेढ सय गाउ“लेलाई बोकाएर सुनसेरामा जम्मा पारिएको रक्तचन्दन तिंकर ढुवानी गरिएको हो ।
छाङरु मार्ग हु“दै रक्तचन्दन तिंकर पुर्‍याउन दर्ुइ साता लागेको बताउ“दै भरियाले भने, 'बाटोमा प्रहरी,
वनका कर्मचारी तथा वाईसीएलले केरकार नै गरेनन् ।' ताक्लाकोट पुर्‍याउन डेढ सयभन्दा बढी घोडा खच्चरसमेत प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रशाशन, प्रहरी, वन र माओवादीले रकम लिएपछि सजिलै रक्तचन्दन तिब्बतको ताक्लाकोट पुर्‍याइएको स्रोतले बतायो । तस्करीमा काठमाडौंका कुमार श्रेष्ठ, सदरमुकाम खलंगाका केही व्यापारी तथा भारतीय व्यापारीे संलग्न रहेको बताइएको छ । गत कात्तिक १५ गते भारतबाट वर्तीघाटसम्म ट्रकमा ल्याइएको रक्तचन्दन तुइनबाट महाकाली नदी तारी सुनसेरा पुर्‍याइएको थियो । सीमामा भारतीय सुरक्षा बल -एसएसबी) तैनाथ भए पनि रकम असुली अवरोध नगरेको स्रोतले बतायो ।
सुनसेरामा प्रहरी चौकी इन्चार्ज अर्सइ दानसिंह भाटले रोक्ने प्रयास गरेका थिए तर तस्करले डीएसपीसित कुरा मिलिसकेको भन्दै भाटलाई अवरोध नगर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो ।
सुनसेरामा वनको रेन्जपोस्टसमेत छ । तस्करी भइरहेका बेला चार वनरक्षक त्यहा“ थिए । रक्षकले तस्करीबारे वनअधिकृतलाई जानकारी गराए पनि अवरोध नगर्न अधिकृतले निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार तिंकरसम्मको ढुवानी जिम्मा वाईसीएलले लिएको थियो । तर माओवादीले आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ । 'संलग्न रहेको पाए कारबाही गछौर्ं,' जिल्ला समिति सदस्य जमनसिंह धामीले भने । सुनसेराबाट छाङ्रु हु“दै तिंकर पुग्न चार दिन लाग्छ । छाङरुमा पनि त्यो बेला ३४ जना सुरक्षाकर्मी र वनको रेन्जर पोस्ट थियो ।
भरियाका अनुसार रक्तचन्दन २ सय ६५ 'गेल' थियो । एक गेलमा करिब ४० देखि ५० किलो भएको भरियाले बताए ।
रक्तचन्दन तस्करीको नया“ मार्गबारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी भए पनि कारबाहीका लागि सक्रियता देखाइएन ।
प्रशासनले सुरक्षाकर्मी, वन, जिविस, वन उपभोक्ता महासंघका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई अनुगमनका लागि खटाएको सहायक प्रजिअ तुल्सीराम पौडेलले बताए ।
देश मा सरकार अवैध छ , संसद अवैध छ , नियम कानुन नामको चरो छैन , सबैले खान र कमाउन मा नै लुछाचुडी गरिराछन भने ती सुदुर पश्चिमका जनता ले पनि किन दुई चार लाख जोड्न नपाउनु !
कमसेकम पैसा गाउका निमुखा जनता कहाँ त पुग्यो होइन र !
मैले कुनै बेला यो पोस्ट्मा लेखेको थिए मेरो राय:
तर तस्करी चोरि पैठारी भन्ने काम गलत हो यस्को समर्थन गर्नु हुँदैन ।